လူတွေသတိမထားမိသေးတဲ့ Discord Virus – Gaming Noodle
လူတွေသတိမထားမိသေးတဲ့ Discord Virus
Discord ဆိုတာကတော့ Video Game Community တစ်ခုလုံး အသုံးပြုနေတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး channel တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ လူဦးရေသန်း ၂၅၀ ကျော်အထိ အသုံးပြုနေကြတဲ့ ဒီ App ကိုတော့ iOS, Android နဲ့ PC တွေမှာပါ free download ရယူပြီး သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲ Organizer တွေနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့အခါ၊ ပြိုင်ပွဲသတင်းတွေ ရှာဖွေတဲ့အခါ၊ Training အတွက် အခြားအသင်းတွေနဲ့ အချိန်းအချက်ပြုလုပ်တဲ့အခါ၊ အသင်းအတွက် လူလိုတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်အတွက် အသင်းရှာဖွေတဲ့အခါ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ အများဆုံး အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီ app အသုံးပြုသူများအနေနဲ့တော့ လက်ရှိမှာ ပြန့်ပွားနေတဲ့ Virus တစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာ သိတဲ့သူ နည်းပါးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ Virus အကြောင်းကို SplatterShah ဆိုတဲ့ Gamer တစ်ယောက်က သတိထားမိပြီး Twitter မှာ ဒီလိုရှင်းပြထားပါတယ်။
1. သင့် Discord ဆီကို သင့်ရဲ့ friend list ထဲကတစ်ယောက်ကနေ Link တစ်ခုပို့ပါလိမ့်မယ်။ လာပို့တဲ့ link တွေက ပုံစံကွဲတွေရှိပေမယ့် သူကတော့ လက်ရှိပုံစံ ၂ မျိုးကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
2. အဲဒီ link ကဘာလဲဆိုတော့ တကယ် Discord က လင့်ပုံစံလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အမှန်ကတော့ အတုအယောင်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် Discord မှာ Channel တွေကို Invite လုပ်တဲ့ လင့်ဖြစ်တဲ့ discord(dot)gg ဆိုတဲ့နေရာမှာ “discord gg (dot) ga ဆိုပြီး အထင်မှားအောင် လုပ်ထားပါတယ်။
3. အဲဒီ လင့်အမှားကို နှိပ်မိမယ်ဆိုရင် သင့်ကို Discord Login Page အတုတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး သင်ဟာ သင့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ထည့်သွင်းပြီး login ဝင်ဖို့ ကြိုးစားရင်တော့ virus ရဲ့ ထောင်ချောက်ကို ဝင်မိလိုက်ပါပြီ။
4. အဲဒီ virus ကနေ သင့်ရဲ့ အကောင့်အစစ်အမှန်ကိုဝင်ပြီး သူတို့စိတ်ကြိုက် email နဲ့ password တွေ ပြောင်းလဲပြီးရင်တော့ သင်ဟာ သင့်ရဲ့အကောင့်ကို ပြန်လည် ဝင်ရောက်လို့ ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
5. အဲဒီ virus ဟာ သင်စစခြင်း အပို့ခံရသလိုပဲ သင့်ရဲ့ friend list ထဲကလူတွေကို အလားတူ လင့်တွေ လိုက်ပို့ပြီး နောက်ထပ် အကောင့်တွေရရှိအောင် ကြိုးစားပါတော့မယ်။
6. ဒါဟာ သင့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေ ခိုးယူခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Discord မှာသင့်အယောင်ဆောင်ပြီး မသမာမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
7. အကယ်၍ ကိုယ်လည်း ဒါကို နှိပ်မိသွားပြီဆိုရင် ဘာတွေလုပ်သင့်လည်း ဆိုတာကို SplatterShah က ဒီလို အကြံပေးထားပါတယ်။
– ချက်ခြင်း ကိုယ်မှန်း လူသိကြမယ့် နာမည်နဲ့ အကောင့်သစ်တစ်ခု လုပ်ပါ
– သင့်ယုံကြည်ရမယ့် သူငယ်ချင်းတွေကို ရသလောက် ပြန် Add ပါ
– သင်အရင် join ထားတဲ့ Channel/Server တွေထဲ ပြန် join ပါ
– အဲဒီ Channel/Server ထဲက Admin တွေ Moderator တွေကို သင့် အဖြစ်အပျက်တွေကို စိတ်အေးအေး ရှင်းပြပေးပါ
– သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကိုလည်း ဝင်ပြီး ထောက်ခံခိုင်းပါ
– Discord ရဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ယောက်ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီတောင်းပါ
8. အကယ်၍ သင့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်က အဲလို Virus လင့်မျိုး လာပို့ပြီဆိုလျှင် သူပါနေတဲ့ Group တွေမှ ထုတ်ပါ။ သူကိုလည်း Unfriend လုပ်ပါ။ တခြားသူများကိုလည်း Unfriend လုပ်ဖို့ အသိပေးပါ။ သူငယ်ချင်းရဲ့ အကောင့်သစ်ကိုလည်း အခြားသူငယ်ချင်းတွေဆီ အသိပေးပါ။
9. အကယ်၍သင်ဟာ Channel/Server တစ်ခုရဲ့ Admin တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး သင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်က Virus မိနေပြီဆိုရင် သူတို့ရဲ့ အကောင့်သစ်ကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့ ကူညီပေးပါ။ အကောင့်ဟောင်းကိုလည်း ထုတ်လိုက်ပါ။
10. ဒီလို အဖြစ်မျိုး သင်ကိုယ်တိုင်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရလည်း ဆိုတော့ သင့်အကောင့်ကို Two-Factor Authentication (အဆင့် ၂ ဆင့်သုံး လုံခြုံရေးစနစ်) ကို အသုံးပြုပါ။ သင့်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း အသုံးပြုဖို့ အကြံပြုပါ။ Discord ကို report လုပ်ပါ။
အခုလို Virus မျိုးဟာ မြန်မာပြည်မှာ အသုံးပြုနေကျ Facebook လို Social Media မျိုးမှာ အလားတူ ပုံစံမျိုး ရှိနေပေမယ့် Discord အသုံးပြုသူတွေအတွက် အနည်းငယ် စိမ်းနေနိုင်တာမို့လို့ ယခုလို ဖော်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာကို သင်ကိုယ်တိုင်ရော သင့်ရဲ့ Gamer သူငယ်ချင်းတွေရော ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး မဖြစ်ရလေအောင် အခုပဲ မျှဝေပေးလိုက်ပါ ခင်ဗျာ။
လူတှသေတိမထားမိသေးတဲ့ Discord Virus
Discord ဆိုတာကတော့ Video Game Community တဈခုလုံး အသုံးပွုနတေဲ့ ဆကျသှယျရေး channel တဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိတဈကမ်ဘာလုံးမှာ လူဦးရသေနျး ၂၅၀ ကြျောအထိ အသုံးပွုနကွေတဲ့ ဒီ App ကိုတော့ iOS, Android နဲ့ PC တှမှောပါ free download ရယူပွီး သုံးစှဲနိုငျပါတယျ။
ပွိုငျပှဲ Organizer တှနေဲ့ ဆကျသှယျတဲ့အခါ၊ ပွိုငျပှဲသတငျးတှေ ရှာဖှတေဲ့အခါ၊ Training အတှကျ အခွားအသငျးတှနေဲ့ အခြိနျးအခကျြပွုလုပျတဲ့အခါ၊ အသငျးအတှကျ လူလိုတဲ့အခါ၊ ကိုယျ့အတှကျ အသငျးရှာဖှတေဲ့အခါ နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ဆကျဆံတဲ့အခါ အမြားဆုံး အသုံးပွုကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီ app အသုံးပွုသူမြားအနနေဲ့တော့ လကျရှိမှာ ပွနျ့ပှားနတေဲ့ Virus တဈမြိုးရှိတယျဆိုတာ သိတဲ့သူ နညျးပါးပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီ Virus အကွောငျးကို SplatterShah ဆိုတဲ့ Gamer တဈယောကျက သတိထားမိပွီး Twitter မှာ ဒီလိုရှငျးပွထားပါတယျ။
1. သငျ့ Discord ဆီကို သငျ့ရဲ့ friend list ထဲကတဈယောကျကနေ Link တဈခုပို့ပါလိမျ့မယျ။ လာပို့တဲ့ link တှကေ ပုံစံကှဲတှရှေိပမေယျ့ သူကတော့ လကျရှိပုံစံ ၂ မြိုးကို အောကျပါအတိုငျး တှရှေိ့ထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
2. အဲဒီ link ကဘာလဲဆိုတော့ တကယျ Discord က လငျ့ပုံစံလုပျထားတာဖွဈပွီး အမှနျကတော့ အတုအယောငျသာ ဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျ Discord မှာ Channel တှကေို Invite လုပျတဲ့ လငျ့ဖွဈတဲ့ discord(dot)gg ဆိုတဲ့နရောမှာ “discord gg (dot) ga ဆိုပွီး အထငျမှားအောငျ လုပျထားပါတယျ။
3. အဲဒီ လငျ့အမှားကို နှိပျမိမယျဆိုရငျ သငျ့ကို Discord Login Page အတုတဈခုကိုချေါဆောငျသှားမှာဖွဈပွီး သငျဟာ သငျ့ရဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ထညျ့သှငျးပွီး login ဝငျဖို့ ကွိုးစားရငျတော့ virus ရဲ့ ထောငျခြောကျကို ဝငျမိလိုကျပါပွီ။
4. အဲဒီ virus ကနေ သငျ့ရဲ့ အကောငျ့အစဈအမှနျကိုဝငျပွီး သူတို့စိတျကွိုကျ email နဲ့ password တှေ ပွောငျးလဲပွီးရငျတော့ သငျဟာ သငျ့ရဲ့အကောငျ့ကို ပွနျလညျ ဝငျရောကျလို့ ရတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။
5. အဲဒီ virus ဟာ သငျစစခွငျး အပို့ခံရသလိုပဲ သငျ့ရဲ့ friend list ထဲကလူတှကေို အလားတူ လငျ့တှေ လိုကျပို့ပွီး နောကျထပျ အကောငျ့တှရေရှိအောငျ ကွိုးစားပါတော့မယျ။
6. ဒါဟာ သငျ့ရဲ့ အခကျြအလကျတှေ ခိုးယူခံရတာဖွဈတဲ့အတှကျ Discord မှာသငျ့အယောငျဆောငျပွီး မသမာမှုတှေ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
7. အကယျ၍ ကိုယျလညျး ဒါကို နှိပျမိသှားပွီဆိုရငျ ဘာတှလေုပျသငျ့လညျး ဆိုတာကို SplatterShah က ဒီလို အကွံပေးထားပါတယျ။
– ခကျြခွငျး ကိုယျမှနျး လူသိကွမယျ့ နာမညျနဲ့ အကောငျ့သဈတဈခု လုပျပါ
– သငျ့ယုံကွညျရမယျ့ သူငယျခငျြးတှကေို ရသလောကျ ပွနျ Add ပါ
– သငျအရငျ join ထားတဲ့ Channel/Server တှထေဲ ပွနျ join ပါ
– အဲဒီ Channel/Server ထဲက Admin တှေ Moderator တှကေို သငျ့ အဖွဈအပကျြတှကေို စိတျအေးအေး ရှငျးပွပေးပါ
– သငျ့ရဲ့ သူငယျခငျြး တဈယောကျကိုလညျး ဝငျပွီး ထောကျခံခိုငျးပါ
– Discord ရဲ့ ဝနျထမျးတဈယောကျယောကျကို ဆကျသှယျပွီး အကူအညီတောငျးပါ
8. အကယျ၍ သငျ့သူငယျခငျြး တဈယောကျယောကျက အဲလို Virus လငျ့မြိုး လာပို့ပွီဆိုလြှငျ သူပါနတေဲ့ Group တှမှေ ထုတျပါ။ သူကိုလညျး Unfriend လုပျပါ။ တခွားသူမြားကိုလညျး Unfriend လုပျဖို့ အသိပေးပါ။ သူငယျခငျြးရဲ့ အကောငျ့သဈကိုလညျး အခွားသူငယျခငျြးတှဆေီ အသိပေးပါ။
9. အကယျ၍သငျဟာ Channel/Server တဈခုရဲ့ Admin တဈယောကျဖွဈနပွေီး သငျ့အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျက Virus မိနပွေီဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ အကောငျ့သဈကို ပွနျလညျဝငျရောကျဖို့ ကူညီပေးပါ။ အကောငျ့ဟောငျးကိုလညျး ထုတျလိုကျပါ။
10. ဒီလို အဖွဈမြိုး သငျကိုယျတိုငျမဖွဈအောငျ ဘယျလိုကာကှယျရလညျး ဆိုတော့ သငျ့အကောငျ့ကို Two-Factor Authentication (အဆငျ့ ၂ ဆငျ့သုံး လုံခွုံရေးစနဈ) ကို အသုံးပွုပါ။ သငျ့မိတျဆှတှေကေိုလညျး အသုံးပွုဖို့ အကွံပွုပါ။ Discord ကို report လုပျပါ။
အခုလို Virus မြိုးဟာ မွနျမာပွညျမှာ အသုံးပွုနကြေ Facebook လို Social Media မြိုးမှာ အလားတူ ပုံစံမြိုး ရှိနပေမေယျ့ Discord အသုံးပွုသူတှအေတှကျ အနညျးငယျ စိမျးနနေိုငျတာမို့လို့ ယခုလို ဖျောပွရခွငျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီအကွောငျးအရာကို သငျကိုယျတိုငျရော သငျ့ရဲ့ Gamer သူငယျခငျြးတှရေော ဒီလိုအဖွဈအပကျြမြိုး မဖွဈရလအေောငျ အခုပဲ မြှဝပေေးလိုကျပါ ခငျဗြာ။
Soruce : SplatterShah’s Twitter